उद्योग विकासको अवस्था | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश-सुदूरपश्चिम उद्योग विकासको अवस्था
उद्योग विकासको अवस्था
प्रदेश नं ७ मा उद्योग–व्यापारको विकास भएको धेरै वर्ष भएको छैन । भौगोलिक विकटता, राजधानीबाट टाढाको क्षेत्र, अशिक्षा, गरीबी, पछौटेपनलगायत कारण यो क्षेत्रले लामो समय राज्यको अभिभावकत्व प्राप्त गर्न सकेन । २०५२ सालमा कर्णाली नदी (चिसापानी)मा पुल बनेपछि मात्रै पश्चिम नेपालको सम्बन्ध पूर्वसम्म जोडिन पुगेको हो । त्यसअघि दैनिक उपभोग्य सामानदेखि बजार अवलोकनसम्म सीमा बजार भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । सडक सञ्जालको खासै विकास भएको थिएन । फाट्टफुट्ट रूपमा सवारीसाधन चलेको देख्न पाइन्थ्यो । आयआर्जनका लागि भारतको विकल्प थिएन । खेतीपाती सकेर कामका लागि भारत जानेहरूको ठूलो लाइन हुन्थ्यो । परम्परागत रूपमा खेती किसानीबाहेक कुनै पनि व्यवसाय शुरू हुन सकेको थिएन ।
२०३६ सालमा कैलाली–कञ्चनपुरमा आवादीबाहेक कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको देखिएन । निजी तथा सरकारी कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय थिएन । कैलाली कञ्चनपुरमा पर्याप्त उत्पादन हुने अन्नबाली खरीदका लागि मौसमी रूपमा भारतीय व्यापारीले ठाउँ–ठाउँमा गल्लाहरू राखेको देख्न सकिन्थ्यो ।
किसानबाट सस्तोमा खाद्यन्न खरीद गरेर भारत लगिन्थ्यो । त्यतिमात्र नभएर किसानबाट सस्तोमा त्यो पनि उधारोमा धान गहुँ खरीद गरी भारत खाद्यन्न निर्यात गर्नेहरूको बिगबिगी नै थियो । समयमा अन्नबाली विक्री गरेको पैसा नपाउने समस्याका यहाँका किसानलाई थियो । सिजनमा कैलाली कञ्चनपुरमा गल्ला राखेर मुस्लिम समुदायका व्यापारीले धान गहुँ सङ्कलन गर्नेबाहेक यहाँ कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय थिएन । किसानले लागतअनुसारको मूल्य त परै जाओस्, समयमा पैसासमेत पाउने अवस्था थिएन । यहाँ एउटा चम्पा नामक खाद्य मिल थियो । खाद्य उद्योगको सम्भावना उच्च देखेर हामीले शुरूमा त्यो मिल केही समय भाडामा सञ्चालन गर्‍यौं ।
खाद्य उद्योगको सम्भावना बढ्दै गएपछि कृषिमा आधारित उद्योगको सङ्ख्या र लगानीमा पनि वृद्धि भयो । कर्णालीमा पुल नभएकै कारण हामीले लामो समय आफ्ना उत्पादनबाहिर पठाउन सकेनौं । जब कर्णालीमा एशियाकै दोस्रो ठूलो पुल निर्माण भयो । त्यसपछि यस क्षेत्रको उद्योग व्यापारले क्रमिक रूपमा गति लिन थाल्यो । राज्यका हरेक सुविधाबाट पछाडि परेको यो क्षेत्रमा उद्योग व्यापार गरेर आम्दानी गर्न त्यति समस्या देखिँदैन ।
राज्यले विकासमा समान अवसर नदिए पनि मानिसका इच्छा, आकाङ्क्षा बढ्दै गएको थियो । हामीले शुरूमा चामल उत्पादन थाल्यौं । मैदा, पीठो, तेलका साथै सुदूर फूड इण्डष्ट्रिजमार्फत बिस्कुट र वेष्टर्न फिडमार्फत पेलेट दाना उत्पादन गर्दै आएका छौं । अहिले पनि यो क्षेत्रमा औंलामा गन्न सकिने उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । राज्यले अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा एउटा पनि आयात–निर्यात नाका खोल्न सकेको छैन । २०६० सालमा हामीले यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो राइस मिल (गोदावरी राइस मिल) सञ्चालनमा ल्यायौं । यसअघि वीरगञ्ज भैरहवालगायतबाट तयारी पीठो ल्याउनुपथ्र्यो । त्यो अवस्था अहिले यो क्षेत्रमा छैन । अन्य व्यवसायीले पनि राइस मिलमा राम्रो लगानी गरेका छन् । हामीले सञ्चालन गरेका उद्योगमा मात्र अहिले करीब ५ सय स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
रोजगारी सृजना गर्ने एकमात्र क्षेत्र भनेकै उद्योग क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ सञ्चालित उद्योग जेनतेन चलिरहेका बेला एकाएक भारतीय नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरताले थप समस्या गरायो । भौगोलिक विकटता भए पनि यो प्रदेश सम्भावनायुक्त प्रदेश हो ।
डँडेलधुरालगायत पहाडी जिल्लामा भटमासको खेती राम्रो हुन्छ । यसको व्यावसायिकता विकासका लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको पाइँदैन । हामीले पहाडी जिल्लाका किसानलाई हामी तपाईंको भटमास खरीद गर्छौं र आवश्यक तालीम पनि दिन्छौं भनेर भटमास लगाउन उत्साहित बनायौं । तर, विडम्बना यो क्षेत्रमा भटमास प्रशोधन उद्योग नभएका कारण त्यो खेर गइरहेको स्थिति छ । त्यस्तै, सूर्यमुखी तेल उत्पादनका लागि पनि यो प्रदेशको हावापानी उपयुक्त भए पनि त्यसका लागि प्लाण्ट निकै महँगो भएकाले लगाउन सकिएको छैन ।
यो प्रदेशमा हरेक उद्योग व्यवसायको सम्भावना उच्च छ, तर जग्गा प्राप्ति सहज छैन । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कैलाली–कञ्चनपुरमा स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो उद्योगी व्यवसायीका लागि पायक पर्ने स्थानमा छैन । त्यसले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकै कारण ठूला उद्योग यो क्षेत्रमा आउन सकेका छैनन् ।
यो प्रदेश खाद्यान्नमा करीब आत्मनिर्भरतानजीक पुगेको छ । यद्यपि, मोटो धान लगाउने र उपभोगका लागि मसिनो चामल चाहिने अवस्थाले भारतबाट चामल आयात बढिरहेको छ । म कैलालीको उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष भएका बेला भारतको उत्तराखण्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले बिजुली, पानी, उपकरणमा सहुलियत दिएर उद्योग खोल्न लगाएको सुनेँ । मैले सोधेँ, ‘यति धेरै सुविधा उद्योगीलाई दिँदा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ ?’ त्यहाँको सरकारले भन्यो, ‘ऊर्जाशील शक्ति बाहिरिन थाल्यो, उर्वर भूमि उजाड बन्न पुग्यो । आयात तथा बेरोजगारी समस्या बढेपछि लामो समयका लागि लिजमा जग्गा, कर छूट, उच्च प्रोत्साहनलगायत सुविधा दिइएको हो ।’ अब हामीले पनि त्यहाँको विकास मोडल किन अनुसरण नगर्ने ? हिजो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । अब त प्रदेश सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो नि !
सुविधाविना करमात्र बढाएर हामी दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । औद्योगिक वातावरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । बैङ्कहरूले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको ऋण एकाएक बढाएर १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै अवस्थामा विकासको उचाइ लिन सकिँदैन ।
(लेखक कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)